‘गरुड पुराण’ले पायो एकल रिलिज:फाइदा कत्तिको ?(भिडियो ) « Mazzako Online
‘गरुड पुराण’ले पायो एकल रिलिज:फाइदा कत्तिको ?(भिडियो )
माघ महिनाको पहिलो हप्ता धेरैपछी कुनै नेपाली फिल्मले एकल रिलिजको स्वाद लिन पाएको छ ।यस शुक्रबार फिल्म ‘गरुड पुराण’ एक्लै हलमा लागेको छ । प्रायः हरेक हप्ता दुई वा दुई भन्दा बढी फिल्म रिलिज हुने गर्छ । यस पटक ‘गरुड पुराण’ले यो मौकाको कत्तिको फाइदा उठाला त्यो भने हेर्न बाकी नै छ ।
फिल्मले ब्यान्ड बाजा बजाउने समुह र उनीहरुको परिवारले गरेको संघर्षको रमाइलो कथा उठाएको छ । यस फिल्ममा अभिनेता नाजिर हुसेन ब्यान्ड मास्टरको भूमिकामा छन् । फिल्ममा कर्मा, लुनिभा तुलाधर, प्रविण खतिवडालगायतको पनि अभिनय छ ।
यही फिल्मबाट प्रियंका सिंहले नवोदित नायिकाको रुपमा डेब्यु गरेकी छिन् । अजित प्रजापति र अशोक गौतमले निर्माण गरेको यो फिल्मको कथा कसम नेपालको, पटकथा बिनोद खतिवडा, अकाश बराल र सुवासको हो । ‘गरुड पुराण’ लाई सुसन प्रजापतीले खिचेका हुन् ।
कमेडी कथा बस्तु बोकेको यस फिल्ममा नाम चलेका कलाकार भएका कारण पनि फिल्मले एकल रिलिज पाएको हुन सक्छ । पुस र माघ महिना भरीनै खासै कुनै फिल्मले गतिलो ब्यापार गर्‍यो भन्ने कुरा सुनिएको छैन । यस फिल्म को ट्रेलर र ‘म त पिरिममा’बोलको गीतले राम्रै चर्चा पाएको हुनाले ब्यापारिक हिसाबले पनि यस फिल्मले राम्रै गर्छ कि !